Indawo kaLe-sow-dee - Mphatlalatsane - I-Airbnb
Indawo kaLe-sow-dee - Mphatlalatsane
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLemphane
Yonwabela ubusuku obuthuleyo kwikhaya lethu elikhuselekileyo elikumgama weekhilomitha eziyi-8 ukusuka embindini wedolophu (umyinge wemizuzu eyi-25). Kukho iyadi esisiseko enokulungiselela iintente/oomatrasi ukuba unqwenela ukuphumla phakathi kwiindawo ezinkulu zeentaba zeLesotho uze uphumle kwigumbi lokulala elinendawo yokuhlambela ekwigumbi lokulala elinendawo yokuhlambela.
Oku kubhukisha kuxhomekeke kwigumbi ngalinye ibe naziphi na iindwendwe ezongezelelekileyo ukuya kutsho kweziyi-4 ziza kubhatalwa kumagumbi ohlukeneyo ngeendleko ezongezelelekileyo zegumbi ngalinye. Igumbi ngalinye linokuhlala abantu abayi-2
Ukuba awunalo igumbi lokulala elincinci, ngoko awuyi kuba naxhala lokuhlala nathi. Uza kukwazi ukufikelela kwigumbi lakho lokulala kunye nebhafu okanye ishawa kunye nendlu yangasese, indawo yokuphumla kunye nekhitshi elinomatshini wokuhlamba impahla xa ufuna ukutshintsha iimpahla ngokutsha.
Indawo ekufutshane yindawo ehlala abantu abaninzi ibe inebhari ye-jazz esecaleni komnyango (evala ngo-10pm, enkosi kwaye ayinayo inkqubo yokukhalisa umculo enengxolo)
Umbuki zindwendwe ngu- Lemphane
Umbuki zindwendwe uhlala kuloo ndlu ibe kuza kusoloko kukho umntu oza kunceda.